फेरी के भयो मिथिलालाई ? – Gazabkonews
डेढ सय बढी चलचित्रमा अभिनय गरेकी चर्चित कलाकार मिथिला शर्माले मनाइन् बुढेसकालमा एनिभर्सरी, यि चर्चित कलाकार पुगे मिथिलाको एनिभर्सरी, त्यही मौका छोपेर गुनासो गर्दै रोइन् मिथिला, फेरी के भयो मिथिलालाई ? यस्तो खुशीको दिनमा पनि किन खुशी हुन सकिनन् र भक्कानिइन् ?
चर्चित अभिनेता अनुप बिक्रम शाहीको एक्सन राम्रो भएको भन्दै प्रहरीको यस्तो महत्वपूर्ण कमाण्डको जिम्मा दिइयो, यसरी फुल माला र अबिरले सम्मान गरियो अनुपलाई, भर्ती भएको हप्ता दिनमा नै यसरी ठेगान लगाए काठमाडौँका टोले गुण्डालाई, समकक्षी प्रहरीहरु नै अनुपको काम देखेर चकित
सुत्केरी हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहेका बेला प्रियंका कार्कीकी आमा छोरीलाई भेट्न आयुष्मानको घरमा पुगीन्, प्रियंकाको पेट नै सुमसुम्याउँदै मेरा बच्चा मेरो नातिनी छिटो यो पृथ्वीमा आउ र हामीलाई खुशी देउ भन्दै प्रियंकाको हुनेवाला बच्चालाई यति राम्रा कपडा लगिदिइन्, बच्चा जन्मिए लगत्तै यो कपडा लागाइदिने हो भन्दै घरभरी कपडा फिजारे, आयुष्मानलाई ज्वाई साब हजुर सारै भाग्यमानी, तपाईजस्तो मान्छे खोजेर पनि पाइदैन भन्दै गरिन् तारिफ, हेर्नुहोस् भिडियो
सरिता लामिछानेको ब्यबहारका कारण घरमा ब बा ल, भाई बुहारीसँग मिल्न नसक्दा आइपर्यो यस्तो स मस्या, कहिलेसम्म माइतीमा सरिताको राज चल्छ अझै भन्दै भाइ बुहारीले नै जनाए आ प त्ति
गर्भवती पत्निलाई धोका दिए प र स्त्रीसँग हिँडेर पत्निलाई धो का दिए यि पतिले, पत्निको नाममा भएको सारा सम्पत्ति प्रेमीकाको नाममा गर्न बा ध्य पारे, सम्पत्ति आफ्नो नाममा भएपछि प्रेमीकाले पनि धोका दिएपछि यि प्रेमी सडकमा आएर भिख माग्ने अवस्थामा पुगे र अन्तत तिनै ग र्भवती पत्निले साहारा दिइन्, वास्तविक यो घ ट ना ले सबैको मन रुन्छ, तपाईका पनि आँखा र साउँछन् ययि दृश्यले, हेर्नुहोस् यो मार्मिक भिडियो
भ्वाइसका कोच राजु लामाले मेलम्ची पुगेर बाढी पिडितलाई लाखौँ सहयोग गरेर फर्किदा भ्वाइसका अन्य कोचहरु प्रमोद, तृष्णा र दिपका मनमा किन पलाएन दया ? के राजु मात्रै हुन् भ्वाइसमा सहयोगी कोच ? राजुलामाको चौतर्फी चर्चा चलीरहँदा अन्य कोचहरुबारे उठ्यो गम्भिर प्रश्न
१९१ अंकको करेक्सनपछि नेप्सेमा करिब ८० अंकको बृद्धि, कारोबार रकम भने १० अर्बमा सिमित : गत पाँच कारोबार दिनमा १९१ अंकले घटेको नेप्से सूचक मंगलबार एकैदिन ८० अंकले बढेको छ। यस दिन कारोबारमा आएका अधिकांश कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा नेप्से सूचक उच्च अंकले बढेको हो। मंगलबार नेप्से सूचक उच्च अंकले बढे पनि कारोबार रकम भने खासै बढ्न सकेन। १९ अर्ब भन्दा माथिसम्म पुगेको कारोबार रकम मंगलबार १० अर्ब रुपैयाँमा सिमित भएको छ।
मंगलबार नेप्से सूचक ७९.४३ अंकले बढेर २९१३.८४ विन्दुमा पुगेको छ भने सेन्सेटिभ सूचक पनि १६.२० अंकले बढेर ५३६.३४ विन्दुमा पुगेको छ। यस दिन २२३ वटा कम्पनीको १ करोड ९७ लाख ७० हजार ६३८ कित्ता शेयर १० अर्ब २८ करोड ६२ लाख ६९ हजार ९५७ रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ।
३३ कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार ६ कम्पनीको भने घट्यो : मंगलबार कारोबारमा आएका ३३ वटा कम्पनीको शेयर सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस दिन पाँच कम्पनीको शेयर १० प्रतिशतले बढेको छ भने २८ कम्पनीको शेयर ९ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ। मंगलबार जानकी फाइनान्स,बरुण हाइड्रोपावर,जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, ङादी ग्रुप पावर र पञ्चकन्या माइ हाइड्रोपावर उच्च रुपले शेयरमूल्य बढ्ने कम्पनीको शीर्ष स्थानमा छन्।
मंगलबार ६ वटा कम्पनीको शेयरमूल्य भने सामान्य घटेको छ। यस दिन गोर्खाज फाइनान्सको शेयरमूल्य १.५९ प्रतिशतले घटेको छ भने रुरु जलविद्युतको ०.३१ प्रतिशत,आरम्भ चौतारी लघुवित्तको ०.२० प्रतिशत,नेरुडे लघुवित्त,सुर्योदय लघुवित्त र सबैको लघुवित्तको शेयरमुल्य ०.०६ प्रतिशतले घटेको छ।
मंगलबार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको मात्रै १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको ३२ करोड २५ लाख, नेशनल हाइड्रोपावरको २६ करोड ३४ लाख र नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकको २० करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यस दिन कारोबारमा आएका १३ वटै उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएका छन्। जसमा विकास बैंक,हाइड्रोपावर र फाइनान्स कम्पनी उपसमूहको सूचक ५ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ।
सेयर बजारमा कहिले काँही उल्टो बाटो हिँड्दा फाईदै फाईदा : सेयर बजारमा सुल्टो हैन, उल्टो बाटो हिड्दा अहिले फाईदै फाईदा छ । बजारमा विभिन्न हल्ला चलेर सेयरको मूल्य उच्च दरले घटी जब लगानीकर्ताहरु रुवाबासी गर्न थाल्छन, तब छानी छानी सस्तो दरमा राम्रा कम्पनीहरुको सेयर किन्दै जाने र जब सेयरको मूल्य बढ्दै गएर राम्रो फाईदा हुन्छ तब नाफा गरेर सेयर बिक्री गर्ने नै उल्टो बाटो हो ।
यस्तो बाटो हिड्न जो कोही सक्दैनन् तर जो हिड्छन्, घाटासँग आक्कल झुक्कल साक्षात्कार हुन्छन्, नाफामाथि नाफा हुन्छ । अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डले ५१ कम्पनीको सेयरमा बढी चलखेल भएको भन्दै सूची सार्वजनिक गरेको बहानामा सेयरको मूल्य उच्च दरले घटाउने खेल भएको छ र लगानीकर्ताहरु आँत्तिएका छन् । चलाख लगानीकर्ताहरु भने यही मौकामा छानी छानी राम्रा कम्पनीहरुको सेयर किन्ने प्रयासमा हुन्छन् ।
धितोपत्र बोर्डको बिज्ञप्ति आउनु भन्दा अगाडि जसले महंगो दरमा सेयर बिक्री गरे र नाफा हात पारेर पैसा थुपारी बसेका छन्, उनीहरु त अहिले बजार अरु घटोस भन्ने कामना गरिरहेका होलान् । खराब र हकप्रदे कम्पनीमा नचाहिँदो ढंगले उचालिएकाहरुलाई बजारले एकहदसम्म सबक सिकाएको हुनुपर्छ तर यसले सुरक्षित लगानी गर्नेहरुलाई चाँही मौका सिर्जना गरेको छ । बजारले मौका दिएको छ, त्यसको सदुपयोग गरौं । नीति नियम, पुर्वाधार र प्रविधि कमजोर रहेको देशको पूँजी बजारमा अनेक खालका हल्लाहरु चलाईन्छन् । कहिले नेप्से र धितोपत्र बोर्डको बक्तब्य आउँछ त कहिले मौद्रिक नीति र बजेटको डर सिर्जना गरिन्छ ।
बजार पूर्ण रुपमा स्वचालित नहुँदाको कमजोरी समातेर खेलाडीहरुले नचाईरहन्छन् । त्यो बेला बुझेर सेयर बजारमा सही ढंगले लगानी गर्न सकियो भने कमाउने संभावना निकै धेरै छ । अहिले हकप्रदे र खराब कम्पनीमा त आँखा समेत लगाउनु हुन्न । राम्रा कम्पनीले अवसरहरु दिएका छन् । बजार घटाईको मारमा आत्तिएर जब नयाँ तथा साना लगानीकर्ताहरुले राम्रो कम्पनीको सेयर घाटा खाएर बेचिरहेका हुन्छन्, पहिले खराब कम्पनीमा उचालिएकाहरु लौ डुब्ने भईयो भन्दै जति मूल्यमा पायो त्यतिमै सेयर बेचेर भागिरहेका हुन्छन्, त्यसले बजार घटाईलाई सहयोग गर्छ ।
यही बीचमा कुनै अर्को नकारात्मक खबर वा सूचना बाहिरियो भने लगानीकर्ताहरुमा थप सन्त्रास पैदा हुन्छ । खेलाडीहरु बजार घटाउन यस्तै अस्त्रहरु प्रयोग गर्छन । विभिन्न नामधारी विश्लेषकहरु, सामाजिक संजाल र मिडियाहरुको भरपुर उपयोग गर्छन । सेयरको मूल्य बढाउँन पनि त्यस्तै अस्त्रको प्रयोग हुन्छ । सेयरको मूल्य बढ्दै गर्दा अरु बढ्छ भनेर उचाल्ने अनि घट्न थाल्दा अरु घट्छ भन्दै त्रास सिर्जना गर्ने तत्वहरु सक्रिय रहिरन्छन् । उनीहरुलेसमग्र लगानीकर्ता र बजारको हित भन्दा पनि आफ्नो अनुसारको हल्ला गरिरहेका हुन्छन् र सर्बसाधारण नयाँ लगानीकर्ता त्यसैको शिकार हुन्छन् ।
नयाँ तथा सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरु सेयरको मूल्य बढ्दा मात्र किन्ने र घट्न थाल्दा घाटा खाएर बेचेर भाग्ने गर्दा भागदौडको अबस्था सेयर बजारमा जहिले पनि रहन्छ । सेयर बजारमा आउनेहरु सबैले सुरक्षित लगानी गर्छन, सबैलाई नाफा नैै हुन्छ भन्ने ठेक्का कसैले लिन सक्दैन । अरुतिरको बजारको उदाहरण हेर्दा पनि सेयर बजारमा आउने ९० प्रतिशत लगानीकर्ताले गुमाएका हुन्छन् ।
कहिले काँही नियमनकारी निकायहरु पनि सेयर बजारका खेलाडीहरुको अस्त्र बनिदिन्छन् । बजारका लागि सही र आबश्यक नीति, नियम, पुर्वाधार र प्रविधिको बन्दोबस्ती गर्न छाडेर सेयरको मूल्य बढाउने र घटाउने खेलमा, कम्पनीको मूल्य तोक्ने खेलमा सरकार र निमायकहरु लागे भने बजारमा हुने नै यस्तै हो । बजारमा प्यानिक अबस्था सिर्जना हुन्छ । कहिले सेयरको मूल्य बबलिंग भएर जान्छ त कहिले सेयरको मूल्य एक कप चियाको मूल्य भन्दा पनि सस्तो हुन्छ ।
बजारमा हुने खेल र नीतिगत अस्थिरताले हाम्रो बजारलाई जहिले पनि प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । यो कुरा सर्बसाधारण लगानीकर्ताले बुझ्नु जरुरी छ । अहिले खेलाडीहरु सकेसम्म सस्तो मूल्यमा सेयर उठाउँन पाईयोस भन्दै अनेक हल्ला चलाईरहेका छन् । यही खेल बुझेर सेयर बजारमा उल्टो बाटो हिड्दा फाईदै फाईदा छ । सेयरको भाउ माथि गएको बेला सेयर बिक्री गर्ने र तल झरेको बेला किनेर बस्नेले चिन्ता गर्नु पर्दैन ।
सेयर बजारको घटाईबाट बजारमा अवसर सिर्जना हुन्छ भने बढाईबाट फाईदा सुरक्षित गर्ने उत्तम विकल्प देखापर्छ । यसमा चुकियो भने पछुताउमा परिन्छ । लाभांश र पूँजीगत लाभको दुबै अबस्था हेरेर बजारमा लगानी गर्ने बेला यही हो । आउने ३ महिना भित्र लाभांश पनि पाईने र सेयरको मूल्य बढेर दोहोरो फाईदा हुने कम्पनी छनौट गर्न सकियो भने उल्टो बाटो हिडाईको उपलब्धि हासिल हुनेछ ।